Farmaajo oo baaq deg deg ah ka soo saaray dagaal beeleedka ka socda deegaanka Xeeraale ee Gobolka Gal-guduud. – Kismaayo24 News Agency
by Tifaftiraha K24 21st July 2017 063
Muqdisho, 21 Luulyo 2017: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka kataagan agagaarka deegaanka Xeeraale ee Gobolka Gal-guduud.
Maxaa ka soo baxay shirka golaha wasiirada oo maanta qodobo xasaasi ah looga dooday?
TOP NEWS: Raisul Wasaare Sharmaarke oo Gaaray Magaalda Garoowe Xili Cabdi Wali Gaas uu Ka dhoofay Garoowe
Warbixin xasaasi ah: maxay tahay sababta ay wali macaluushu u jirto? maxaase soo cel celinaayo markasto?